Wafdi uu hogaaminaayo Maxamed Cumar Carte, ayaa maanta waxa ay gaareen Magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Baay. – STAR FM SOMALIA
Wafdi uu hogaaminaayo Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Somaliya Maxamed Cumar Carte, ayaa maanta waxa ay gaareen Magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Baay.
Ujeedada wafdigan ay u tageen Magaalada Baydhabo, ayaa waxa ay tahay sidii ay u ogaan lahaayeen xaalada Magaalada Baydhabo iyo tan Gobolka Baay, xilli roobabkii ka da’ay Gobolka Baay ay geysteen Khasaaro dhimasho iyo mid xoolo intaba.
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka dalka ayaa wuxuu Guddoomiye u yahay Guddiga loo magacaabay Fataahadaha ka dhasha roobabka la filaayo inay Somaliya ka da’aan.
Maxamed Cumar Carte Qaalib Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Somaliya iyo Wafdigiisa ayaa dhawaan waxa ay ka soo noqdeen Magaalada Beladweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan, halkaasi oo maamulka iyo Bulshada deegaanka ay kula soo kulmeen.
Inta ay Magaalada Baydhabo joogaan masuuliyiintaan ayaa waxa ay warbixino xaaladaha nolosha la xiriirta ka dhageysan doonaan Masuuliyiinta Maamulka Koonfur Galbeed.
Qaramada Midoobay ayaa horay uga digtay dhibaatooyin kala dhalan kara Roobabka Elnilo oo la filaayo inay Somaliya ka da’aan.